Ares လက်စွဲစာအုပ်။ Ares 2.0.9 ကိုတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်ခြင်း | Gadget သတင်း
Ares လက်စွဲစာအုပ်။ Ares 2.0.9 ၏တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်မှု
တစ် ဦး ကစီးရီးအပေါ်စတင်ခဲ့သည် Ares, Azureus, eMule emule ဆာဗာများ download လုပ်ပါ) နှင့်အခြား P2P အစီအစဉ်များ ထိုပရိုဂရမ်များကိုမည်ကဲ့သို့အသုံးချရမည်ကိုမည်သို့မည်ပုံတပ်ဆင်ရန်အသုံးပြုမည်၊
ခေါင်းစဉ်ဖော်ပြသည်အဖြစ် ငါတို့ Ares နဲ့စတယ်။ ဒီနေ့တွေ့မယ် ၎င်းကိုမည်သို့မှန်ကန်စွာတပ်ဆင်။ မည်သို့ပြုပြင်ရမည်နည်း။ သို့သော်သင်မစတင်မှီ၊ သင်၏ပြproblemနာသည် Ares ကိုမဆက်သွယ်ပါကအမြဲဆက်သွယ်သည်၊ ဘယ်တော့မှအွန်လိုင်းသို့မသွားပါကစာဖတ်ပါ Ares ချိတ်ဆက်မထားဘူး သင်၏ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်
ပထမ) ပထမဆုံးလုပ်မှာက download ares တရားဝင် Ares ဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေ ဒီ link ကိုနှိပ်ပါdownload ဆွဲသော ၀ င်းဒိုးသည်အလိုအလျောက်ပွင့်လာလိမ့်မည်။ ဖိုင်ကိုကူးယူပြီးသင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ရှာဖွေပါ။
ဖိုင်နာမည်က "Aresregular209_installer.exe" (သင်သာတွေ့မြင်လျှင် "Aresregular209" ဘာမှဖြစ်ပျက်, သင်ရုံရှိသည် လျှို့ဝှက် extension များ။ သင်တပ်ဆင်ထားသည့်အခါထည့်သွင်းမှုကိုစတင်ရန်နှစ်ကြိမ်နှိပ်ပါ။
ပထမ) La Ares စက်ရုံ အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်၊ သင်သည်ဤအစီအစဉ်ကိုလိုက်နာရန်သာလိုအပ်သည် (ပထမ ၀ င်းဒိုးတွင်အသုံးပြုသူလိုင်စင်ကိုလက်ခံမည်ကိုသတိရပါ)
« I Agree » >> « Next> » >> « Install » >> « Close »
ပထမ) အပေါ်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း program ကို install လုပ်ထားပါလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ သင့်တွင် firewall တစ်ခုထည့်သွင်းထားပါက၎င်းသည် install လုပ်စဉ်အတွင်းခုန်လိမ့်မည် သင် Ares ကိုအင်တာနက်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ခွင့်ပြုချက်ပေးပါလိမ့်မည်။
ပထမ) ပရိုဂရမ်ကိုဖွင့်ပါ။ အောက်ပါကဲ့သို့ပြတင်းပေါက်တစ်ခုရှိလိမ့်မည် အင်တာနက် tab တက်ကြွ။ ဤအမြင်တွင်သင်အသုံးပြုနိုင်သည် သွားလာရန် Ares (Firefox သို့မဟုတ် Internet Explorer ကဲ့သို့) ဒါပေမယ့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ကျွန်တော်တို့ tab ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့ program ကို configure လုပ်ဖို့အာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ် "ထိန်းချုပ်ရာနေရာ".
ပထမ) ပရိုဂရမ်ကိုပထမဆုံးစတင်သောအခါတွင်အသုံးပြုသူအမည်ကိုရွေးချယ်လိုပါသလား၊ ဟုတ်ကဲ့ကိုနှိပ်လျှင်၎င်းကိုချက်ချင်းလုပ်ဆောင်မည်၊ သို့သော်မဟုတ်လျှင်၎င်းတွင်ရှိသည့်ရွေးချယ်စရာကိုရှာရန်လိုလိမ့်မည်။ "ထိန်းချုပ်ရာနေရာ" Ares အားဖြင့်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန် tab ကိုနှိပ်ပါ "အထွေထွေ" လယ်ပြင်၌ရှိသောအမည်ကို၎င်း၊ "အသုံးပြုသူကို" နှင့်သင်၌ရှိသောဆက်သွယ်မှုအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပါ "မြန်နှုန်း".
ဒီဝင်းဒိုးကိုမထွက်ဘဲ သင်စိတ်ဝင်စားသောရွေးချယ်စရာများကိုရွေးချယ်ပါ သက်ဆိုင်ရာအကွက်ကို check လုပ်ခြင်းဖြင့်အောက်ပါမှ:
ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာကိုစတင်သောအခါ Ares ကိုစတင်ပါ။ အကယ်၍ သင်ဤ box ကို check လုပ်ထားပါကသင်၏ကွန်ပျူတာကိုသင်ဖွင့်တိုင်း Ares သည်အလိုအလျောက်စတင်လိမ့်မည်။ ငါဒါကိုမကြိုက်ဘူး နေထိုင်သူအစီအစဉ် ၎င်းသည်သင်၏ကွန်ပျူတာ၏နှေးကွေးမှုကိုနှေးကွေးစေလိမ့်မည်။
Ares စတင်သောအခါကွန်ယက်သို့အလိုအလျောက်ချိတ်ဆက်ပါ: အကယ်၍ ပရိုဂရမ်ကိုသင်ဖွင့်တိုင်းတိုင်း၎င်းကိုအမှတ်အသားပြုပါကခလုတ်ကိုနှိပ်စရာမလိုဘဲအလိုအလျောက်ချိတ်ဆက်လိမ့်မည် "ဆက်သွယ်ပါ".
Close ခလုတ်ကိုနှိပ်သောအခါ Ares ကိုပိတ်ပါ။ အကယ်၍ သင်အမှတ်အသားပြုသည်ဆိုပါကသင်အနီးကပ်ကိုနှိပ်ပါ (program ၏ဘယ်ဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိအနီရောင်ခလုပ်) သည် program ကိုလုံးဝပိတ်လိမ့်မည်။ သင်ကအမှတ်အသားမပြုပါက close ကိုနှိပ်ပါကသင် window ကိုပိတ်လိမ့်မည်။ သို့သော် program openရိယာ၌ (သင် desktop ၏ညာဘက်အောက်ထောင့်ရှိ) အနည်းဆုံးဖြစ်သော်လည်းဖွင့်နေလိမ့်မည်။
downloads တွင်သတင်းအချက်အလက်ပြတင်းပေါက်များကိုမပြပါနှင့်။ ဒီ option ကအရေးမကြီးဘူး၊ သင်ကမဖြုတ်ဘဲထားခဲ့မယ်ဆိုရင်သင်အပေါ်မှာသင်ပျံဝဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာ download ကိုအကြောင်းကြားပေးတဲ့ ၀ င်းဒိုးတစ်ခုကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။
ကဏ္betweenများအကြားရွေ့လျားနေစဉ်ဗီဒီယိုခဏရပ်ပါ သင် Ares ကဲ့သို့ဗီဒီယိုများကိုကြည့်ရှု။ ကြည့်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဤ box ကို check လုပ်ထားလျှင်သင် tab တစ်ခုမှတစ်ခုသို့သွားသည့်အခါ၎င်းသည် playback ကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်ကအမှတ်မထင်ထားခဲ့လျှင်၊ ဗွီဒီယိုသည်သင်မ ၀ င်လျှင်ပင် ဆက်၍ ဆက်၍ ကစားလိမ့်မည် "Player" tab ကို.
MSN တွင်«ငါဘာတွေနားထောင်နေတယ်ဆိုတာပြပါ။ » သင်ဤ tab ကိုကြည့်ပါကသင်၏ MSN အဆက်အသွယ်များသည်သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သင်နားထောင်နေသည့်အရာကိုမြင်နိုင်လိမ့်မည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်သင် home page ကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သောအရာအားလုံး၏အဆုံးမှာသတိပြုပါ Ares နှင့်အတူရွက်လွှင့် လယ်ပြင်၌ဖြည့် «အင်တာနက်နေအိမ်» သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဝက်ဘ်လိပ်စာ။
ပထမ) ယခုငါတို့ tab ကိုသွားပါ "ဒေါင်းလုပ်"။ ပုံမှန်အားဖြင့်အရာအားလုံးမှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သော်လည်းသင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သောအရာများအားကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရလိမ့်မည်။
အရာအားလုံးကိုအပေါ်ကပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းချန်ထားပြီးသေတ္တာတွေကိုစစ်ဆေးဖို့သတိရပါ « download လုပ်သည့်ရာခိုင်နှုန်းကိုပြသသည်» (သင် download မှ download လုပ်ရန်ဘယ်လောက်ကျန်သည်ကိုသိရန်) နှင့် "downloads တွေကိုပယ်ဖျက်တဲ့အခါအတည်ပြုချက်တောင်းပါ။ " (အမှားအားဖြင့် download ကိုဖျက်ခြင်းမှရှောင်ရှားရန်) ။ သင်၏တပ်ဆင်မှုတွင် "port အတွင်းဝင်လာသော connection များကိုလက်ခံပါ" တွင်အခြား port နံပါတ်ပေါ်လာပါက၎င်းကို and နှင့်ထားခဲ့ပါ မပြောင်းလဲနဲ့ အပေါ်ကပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း။
ဒီမှာနိုးနိုးကြားကြားရှိဖို့လိုတယ် ကျွန်တော်တို့လိုထားခဲ့မယ်ဆိုရင် (အပေါ်ကပုံကိုကြည့်ပါ) Ares သည်ရရှိနိုင်သည့် bandwidth အားလုံးကိုအသုံးပြုလိမ့်မည် အဘယ်သူမျှမကအခြားအစီအစဉ်ကအသုံးပြုသည်အခါ။ သင်အင်တာနက်ကိုကြည့်သောအခါသင်၌ရှိပါက အလွန်နှေးကွေးမြန်နှုန်း upload နှင့် bandwidth ကိုကန့်သတ်ပါ။ ၃ megabytes လောက်ရှိတဲ့ connection အတွက် ၁၀၀ ကိုထည့်သွင်းပါ "bandwidth ပို့ရန်" နှင့် 300 အတွက် "bandwidth ကိုဒေါင်းလုပ်"။ သင် browsing မြန်နှုန်းတိုးတက်မှုမတွေ့ပါက "Download bandwidth" ၏တန်ဖိုးကိုလျှော့ချပြီး downloads အလွန်နှေးနေသည်ကိုသင်တွေ့ပါက၎င်းတန်ဖိုးကိုမြှင့်ပါ။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဟန်ချက်ကိုရှာဖွေရပါလိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံးဒီ tab ထဲမှာကျနော်တို့ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် download folder ကိုရွေးပါ «ဖိုင်တွဲပြောင်းပါ»။ ပုံမှန်အားဖြင့်ပေါ်လာသောအရာကိုလည်းသင်ကြိုက်နှစ်သက်သလိုထားနိုင်သည်🙂
ပထမ) အဆုံးသတ်ရန် Ares ကန ဦး setup ကို ကျန်တဲ့ Ares အသုံးပြုသူများနှင့်မည်သည့်ဖိုင်တွဲများကိုမျှဝေမည်ကိုညွှန်ပြပါမည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန် tab ကိုနှိပ်ပါ ဖိုင်မျှဝေခြင်း အတွင်း "ထိန်းချုပ်ရာနေရာ" ပြီးနောက် tab ကိုနှိပ်ပါ "လက်စွဲဖွဲ့စည်းပုံ"။ သက်ဆိုင်ရာအကွက်များကိုစစ်ဆေးခြင်းဖြင့်မည်သည့်ဖိုလ်ဒါကိုမျှဝေမည်ကိုရွေးချယ်ရမည်။ သတိထားပါ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ရှိသောဖိုလ်ဒါများကိုမမျှဝေပါနှင့်။ သင်ပြီးဆုံးသောအခါခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ "လက်ခံရန်".
ဤအရာအားလုံးဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပါလိမ့်မည် Ares ကိုပြုပြင်ပြီး download လုပ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ မကြာခင်ငါတို့တွေ့လိမ့်မယ် ဒီနည်းကိုအခြားလက်စွဲစာအုပ်ကိုတစ်ဆင့်ချင်းဘယ်လိုသုံးရမလဲ။ ထို့နောက်တိုင်အောင်စပျစ်ဥယျာဉ်နှုတ်ခွန်းဆက်သ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » Software များ » Ares လက်စွဲစာအုပ်။ Ares 2.0.9 ၏တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်မှု
သင်သည်ငါကိုးကွယ်သောသူဖြစ်သည်ကိုငါပြောပြီ။ hahaha ငါအရန်ကူးယူထားသောမိတ္တူတစ်စုံကိုကူးယူရန်ဤသည်ကိုရှာဖွေနေသည်။ ငါသူနှင့် ပတ်သက်၍ သူ၌ရှိသည့်အရာများကိုကြည့်ရှုရန် Vinegar's သို့သွားမည်ဟုငါကျိန်ဆိုသည်။ zaz !!! ဒီနောက်ဆုံးပို့စ်နှင့်အတူလက်ျာဘက်ပြော !!! hahaha ဘယ်တိုက်ဆိုင်မှုလဲ တစ်ပွေ့ဖက်
Uyyyy ရုပ်ဆိုးတဲ့အစီအစဉ်ပါ။ ဟုတ်ပြီ တစ်ခုတည်းသောကောင်းသည့်အချက်မှာသင်၏ torrent သို့မဟုတ် tor သည်သင်၏ ISP အတွက်ပြproblemsနာများရှိပါက၎င်းသည်သင့်ကိုပိုမိုမြန်ဆန်သောအမြန်နှုန်းဖြင့် download လုပ်လိမ့်မည်။ သို့သော်နေဆဲ, ဒီ ares အတွက်အပေါများဆုံးဖြစ်ကြောင်းအရာများ၏စာရင်းဖြစ်ပါတယ်
၃) ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ (ဥပမာ၊ သင် Swenney todd ကိုချွတ်သည်။ ... ထွက်လာသည် ... ahem ... အခြားအရာတစ်ခု)
အလေးအနက်ထားဖြင့် torrent (သို့) အခြားတစ်ခုခုကိုသုံးပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ ... uff ... လွန်းတဲ့သီချင်းတွေကို .mp3 ကသာတွေ့နိုင်တယ်၊
VINEGAR INFORMATICS OF THE POPTIFF ရဲ့ထိပ်တန်းပုဂ္ဂိုလ်ပါ
အကယ်၍ ငါ့ကိုလက်ပေးရင်ကြည့်ရအောင်၊ ရေဒီယို၊ ဂျာဗက်စ်အသံအခန်း (O) ငါဘာလုပ်သင့်သလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကိုယ့် nacho ပါ ဟုသူကပြောသည်
Ares ကို Mp3 အတွက်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တွင်မည်သည့်ပြproblemsနာမျှမရှိခဲ့ပါ။ 🙂
Pk_JoA, ငါ ares ကိုနှစ်နှစ်လောက်သုံးပြီး၊ ဒီထက်ပိုပြီးမလုပ်နိုင်ဘူးလား၊ Gigas နဲ့ Gigas ကိုကူးယူပြီးပြီ။ ငါဘာမှပြproblemနာမရှိဘူး၊ မင်းဘာပြောလဲ ငါခွဲထားသော Luck ဗွီဒီယိုတစ်ခုနှင့်ကျွန်ုပ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်နှင့်တစ်ချိန်ကသင်၌ဗီဒီယိုတစ်ခုသို့မဟုတ်၎င်းမှဖွင့်သည့်အသံကိုနှစ်ချက်နှိပ်ခြင်းဖြင့်သင်အနည်းငယ်ဒေါင်းလုပ်ချပြီးသည်နှင့်၎င်းသည်မဟုတ်သည်ကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။
ငါ pando ကိုစာရင်းထဲထည့်မယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါအတွက်အကောင်းဆုံးကဟုတ်တယ်၊ မကြာသေးမီကအရာတွေကို download လုပ်တာကအဟောင်းတွေအလျင်အမြန်ပျောက်သွားလို့ပဲ
@Tijeran အတွက် Pando သည်အကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်နောက်ကျလွန်းနေသေးသည်။
Ares သည်အချိန်အတန်ကြာအထိ download ပြုလုပ်၍ မရပါ။ ပထမတော့ဟုတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘူး။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ ငါသုံးစွဲသူများသည်ကျွန်ုပ်မျှဝေသောအရာများကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ရန်စီမံသည်ဆိုပါက။ ဖိုင်များကိုပြန်လည်ဒေါင်းလုတ်လုပ်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်သင့်သနည်း။ ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည် port 26890 ကိုရယူသည်။ ၎င်းသည်ဆက်သွယ်မှုရှိသော်လည်းမည်သည့်အရာကိုမဆို download လုပ်သည်ဟုဆိုသည်။
Joaneitorr သည်တယ်လီဖုန်းကုမ္ပဏီအများအပြားသည်ဒေါင်းလုပ်ချခြင်းကိုတားဆီးသည့်အချို့သောဆိပ်ကမ်းများမှဆက်သွယ်မှုကိုပိတ်ဆို့ထားနိုင်သည်၊ ဥပမာ 7329 ကဲ့သို့အခြား Ares အတွက်အသုံးပြုရန်ကြိုးစားသည်။
ကျွန်ုပ်သည်ဤကိစ္စအတွက်အတွေ့အကြုံမရှိသေးပါ။ ကျွန်ုပ်သည်မသေချာပါ။ ဗွီဒီယိုများကို3megabytes ဖြင့်တီဗီတွင်ကြော်ငြာသော vodafone modem မှတဆင့် ares များကို install လုပ်ပြီးကျွန်ုပ်၏ download download speed သည် 8-9 kbps မည်မျှပင်ကြိုးစားပါစေကျွန်ုပ်သည် ငါတစ်စုံတစ်ယောက်ငါ့ကိုကူညီနိုင်သလားအပူတပြင်းဖြစ်၏။
Angelia LUCIA PEREZ ဟုသူကပြောသည်
ငါ၏အ Ares အလုပ်မလုပ်ပါဘူး, အိုင်တီမြင့်မားသောမြန်နှုန်းဒါပေမယ့်ဘာမျှမပျောက်သွားသည်။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ???
wenas ဒီစာမျက်နှာငါ့ကိုကယ်တင်တော်မူပြီ !!!! ငါ ares configuration ကိုညွှန်ကြားချက်တစ်နာရီရှာဖွေနေ ... ... ထို့အပြင်ငါသုညနည်းပညာများ shovels!
ဒါပေမယ့်ဒါတောင်မှတစ်ခုခုကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်တောင်ပံတစ်ခုအမြင့်ဆုံးသောအမြန်နှုန်း (pali, သီချင်းတစ်ပုဒ်, ဗီဒီယို ... ) ကိုငါသိချင်တယ်? ¿?
ငါကဒီစာမျက်နှာပေါ်ရှိညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာသောဖွဲ့စည်းမှုကိုရှိနေသော်လည်းအစဉ်မပြတ်ငါ 40 နှင့် 60 အကြားသွားနှင့်တခါတရံလျော့နည်းသောကွောငျ့ဖွစျသညျ
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအဆင့်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်လိုက်နာခဲ့လို့ပါ။ ကျွန်တော့် ares ကဆက်သွယ်မှုသာပြောပြီးဆက်သွယ်မှုမရှိတာကြောင့်ဒီပြproblemနာမှာမင်းကိုကူညီပေးပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တွေ့ရသောပြနာမှာအချို့ရုပ်ရှင်များတွင်၎င်းတို့ဒေါင်းလုတ်လုပ်သည့်အချိန်တွင်စကရင်သည်အစိမ်းရောင်ဖြစ်လာပြီးဘာမျှမမြင်ရပါ၊ ငါဘယ်လိုဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာမင်းသိတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါကျွန်ုပ်၏စုံစမ်းမှုသည်ကျွန်ုပ်၏ ares သည်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းပြီးကျွန်ုပ်ကိုဖယ်ထုတ်ပြီးပြန်လည်တပ်ဆင်ခဲ့သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ် (သို့) ကျွန်ုပ်ထပ်မံထည့်သွင်းထားသည့်အချိန်တိုင်းကျွန်ုပ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ဆိုင်းငံ့နေသည်ဟုထင်ရသည့်အခါတိုင်းကျွန်ုပ်အားကူညီနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်ကြုံတွေ့ရသောကြီးမားသောပြproblemနာမှာ ares ၏ထိပ်တွင်၎င်း (ချိတ်ဆက်ခြင်း) ပေါ်လာပြီးဘယ်တော့မှ (Online) ပေါ်လာခြင်းမရှိသောကြောင့်မည်သည့်ခေါင်းစဉ်ကိုမဆိုရှာဖွေခြင်းသည်နာရီပေါင်းများစွာကြာပြီးမည်သည့်ရလဒ်မျှမရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ငါအရေးတကြီးတုံ့ပြန်မှုကိုစောင့်ဆိုင်း။
@alex ဘာကိုဒေါင်းလုပ်ချရသလဲ။ ပရိုဂရမ်လား၊
@ Rafa8 သည် Ares browser ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
Ares အံ့သြစရာပါ ...
ငါ theres ၏တစ်ခုတည်းသောသံသယက downloads ကိုခေတ္တရပ်တန့်ပြီးဒေါင်းလုပ်ဖိုင်တွဲကိုအခြား hard disk သို့ပြောင်းသောအခါနေရာများပိုများသောကြောင့် downloads သည်ပုံမှန်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်သည်အလွန်အရေးကြီးသောစီးရီးကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းကြောင့်၎င်းကိုလုပ်ရန်မရဲရဲခဲ့ကြပါ။ ငါ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါက frekal ကိုကြိုးစားကြည့်ပါ့မည်။ ရက်အနည်းငယ်အတွင်းသင်၏မေးခွန်းကိုဖြေပါလိမ့်မည်။
ဟေ့ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့် ares များကိုပြုပြင်ပြီးပါပြီ။ ကျွန်ုပ်သည် download တစ်ခုသာရရှိသည်။ ထိုအချိန်တွင် download မှ ၆ ယောက်သာရှိသည်။ လူတိုင်းကကျွန်ုပ်အား download လုပ်ပြီးကျွန်ုပ်သည်အများဆုံး download ကိုရပြီးအများဆုံး 6kb အမြန်နှုန်းဖြင့် - ရှိသည်။
ဟိုင်းနေကောင်းလား? အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောမေးခွန်းကိုဖြေခြင်း၊ ကျွန်ုပ်သည် Ares ၏အင်တာနက်ကိုရှာဖွေနိုင်လျှင်၊ တကယ်တော့၎င်းသည်အထက်ဖော်ပြပါresရိယာများမှကျွန်ုပ်ရရှိနိုင်သောတစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်သည်။ ငါ့ပြproblemနာအတွက်သင်ဖြေရှင်းနည်းရှိလား၊
@frekal ကိုလုပ်နိုင်သော်လည်းအချို့သောကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်ရမည်။ ဒီနေ့ဒါမှမဟုတ်တနင်္လာနေ့ငါကအကြောင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ထုတ်ဝေရန်။
@ point at6မှာဆံပင်ကသင်ကူးယူနိုင်သည့်လူအရေအတွက်ကို ၂ အထိကန့်သတ်ထားပြီး၎င်းကိုမည်သို့စစ်ဆေးသည်။
@ Rafa8 သင့်တွင် firewall (firewall) တစ်ခုရှိပါကသင်၏ Ares ကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်ဖြတ်တောက်ပစ်ရန်လိုအပ်သည်၊ သို့မဟုတ်ပါကသင်ရှိသည်ဆိုလျှင် Ares Control Panel ရှိ Network tab ကိုကြည့်ပါ။ သင့်အနေဖြင့် "မသုံးပါနှင့် proxy ကိုသုံးသည်" option ကို check လုပ်ထားရမည်
ဟိုင်း!!!! ares 2.0.9 ကို download လုပ်ပြီး m သည်ကြီးကျယ်ခမ်းနားသွားသည်။ ရုတ်တရက်ကျွန်ုပ်သည်အရာရာကိုဒေါင်းလုပ်ချခြင်းကိုရပ်နားလိုက်သည်။ m သည်ကျန်တဲ့သုံးစွဲသူများကိုချိတ်ဆက်ထားသကဲ့သို့ m »ယူသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်ဘာမှမလုပ်နိုင်၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ကမည်သို့လုပ်ရမည်ကိုသိသည် ???? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
@muky သည် download port ကိုပြောင်းသည်။
(ရှလကာရည်) နှင့်သင်မည်သို့ပြုသနည်း ????????
Cristian Salas ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ download folder ထဲမှာဖိုင် ၅၈၀ ကို rar format နဲ့ဖျက်ပစ်ခွင့်ရတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ pc ကို restart လုပ်လိုက်ရင်ပြန်ပေါ်လာတယ်ဗိုင်းရပ်စ်ပဲ။ ဒီ virus ကတစ်စုံတစ်ယောက်သည်ဖျက်ပစ်ရန်ကူညီနိုင်မလား။ nod 580, အွန်လိုင်းပန်ဒါကဲ့သို့သော antivirus သည်ကျွန်ုပ်သည် spybot ကိုကျော်လွန်ပြီးဘာမှမပါ။
@muky ငါရှာနေတာလွယ်တယ်လို့ထင်ပေမယ့်အဖြေမရခဲ့ဘူး။ ကိုယ်စိတ်မကောင်းပါဘူး။
@Cristian, download folder ကိုပြောင်းပြီး rar folder ကိုဖျက်ပစ်လိုက်သလား။
စိတ်မကောင်းပါ၊ ကျွန်ုပ်ကို၎င်းကိုညွှန်ကြားချက်များအတိုင်းပြသရန်ပြင်ဆင်ပြီးပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အားနိမ့်ဆုံးသို့ဆက်လက်ကျဆင်းနေသည်။ ကျွန်ုပ်သည် download ပြုလုပ်မှုကို ၅% မကျော်မီ ၁၀၀ ကျော်သို့မသွားမှီနှင့်ဤအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်သည် windons အမြင်မှ xp သို့ပြောင်းလဲနိုင်သောကြောင့်လုပ်နိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးငါ့ကိုကူညီပါ ...
rar ဖိုလ်ဒါဘယ်မှာ (Cristian) ??? ကျွန်ုပ်သည် download လုပ်ထားသောဖိုင်တွဲကိုချက်ချင်းကျွန်ုပ်သွင်းလိုက်သည်။
ares 2.0.9.3030, ပုံမှန်အားဖြင့်နှေးသည်။ ကျွန်ုပ်တွင်မြန်မြန်ဆန်ဆန် download လုပ်ရန်အသုံးပြုသူများစွာရှိသော်လည်း
ငါ့မှာ port 7415 ကို configure လုပ်ထားတယ်။ အဲဒါက "connection" ထဲမှာပဲရှိနေတယ်။ ငါအင်တာနက်နှင့်အတူအင်တာနက်ချိတ်နေစဉ်တွင်၎င်းကိုအဘယ်ကြောင့်ချိတ်ဆက်မထားသနည်း။
မင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်းများ၊ ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်အချက်အလက်မဆိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရာ၌ ares ၌အလွန်အသုံးဝင်သောအရာအဖြစ်အမှန်တရားရရှိမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ယခုနောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေး၊ firewall နှင့်အခြားတပ်ဆင်ထားသည့်ကာကွယ်မှုများရှိနေသော်လည်းကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်တွေ့ရှိသောကြောင့်၎င်းကိုပယ်ဖျက်ခဲ့သည်။ ac ကနေမတည်ငြိမ်သောစနစ်ကို pc တွင်ပြုလုပ်သော unjade လုပ်သော Trojan များနှင့်ခွဲထားခြင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်သည်အလွန်အမင်းစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းခံရနိုင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ဤကိစ္စရပ်များတွင်ကျိုးနွံသောဗဟုသုတရှိသည်။ ငါဒီကိစ္စမှာတစ်ယောက်ယောက်ကိုငါ့ကိုစိန်ခေါ်စေချင်တယ်။ ????????
အဘယ်ကြောင့်အချို့ downloads များသည် downloads ဖိုင်တွဲသို့မကူးပြောင်းရသနည်း။ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးသည့်နောက်သူတို့အပြီးသတ်သို့မဟုတ်မှားယွင်းစွာရှင်းလင်းသွားပြီးပျောက်ကွယ်သွားရန်မည်သည့်နေရာသို့သွားခဲ့သနည်းအဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်ဤသို့ဖြစ်ပျက်သနည်း။
မာရီယာဒိုလိုရက်စ်, သင် torrent များကိုဖွင့်လျှင်၊ သူတို့သည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကို သုံး၍ တစ်ခုခုကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်သည့်နေရာတွင်သိမ်းဆည်းထားခြင်းမရှိပါ။ Ares ဖြင့် torrent များကိုဒေါင်းလုပ်ချခြင်းသည် torrent ဖိုင်၏နောက်တွင် download ချထားသည်။
ရှလကာရည်၊ ကျွန်ုပ်ပြင်ဆင်လိုက်သောအရာသည်အလွန်ကောင်းမွန်နေခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်တစ်ပတ်မျှ download လုပ်ထားသောနေရာမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းတို့ကို upload တင်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ဖိုင်သုံးခုကိုရှာရန်ကျွန်ုပ်အားမထားရှိပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
သခင်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားကွန်ပြူတာနှင့်လည်းအတူတူပါပဲ၊ ၎င်းသည် ချိတ်ဆက်၍ မရပါ။ ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တယ်။ ဘယ်လိုကြည့်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါ။
ရှလကာရည်, ငါခြေလှမ်းများနောက်သို့လိုက်။ နှင့် "ချိတ်ဆက်ခြင်း" ပေါ်လာပေမယ့်သူကဆက်သွယ်မှုဘယ်တော့မှမ, ငါ firewall ကိုပိတ်ထားပြီးပါပြီနှင့်ငါဘာမျှမနေဆဲငါပြုသကဲ့သို့တူ !!!!!!!! pls ငါ့ကိုကူညီပါ
ရော်နယ်အောင်နိုင်ငါရည်းစားကွန်ပျူတာနှင့်အတူတူပင်ပြproblemနာရှိခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည်ဗိုင်းရပ်စ်ပြproblemနာဖြစ်ခဲ့သည်။ သင်၏ Ares သည်သင့်အတွက်သင့်တော်မှုရှိမရှိကိုစစ်ဆေးရန်သင့်ကွန်ပျူတာကိုဆန်းစစ်ပါ။
Olga ၁၆ ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ဘာကြောင့်အမြဲတမ်းချိတ်ဆက်နေတယ်၊ ​​ဘယ်တော့မှ ONLINE မဖြစ်နိုင်တာလဲဆိုတာကျွန်တော်နားမလည်ပါ။ ဒီအချက်ကကျွန်မကိုခေါင်းကိုက်နေပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
Stuart uchiha ဟုသူကပြောသည်
ကိုယ့် ARES ကိုဒေါင်းလုပ်ချလိုက်ပြီ၊ အဲဒါကကျွန်တော့်ကိုဆက်သွယ်ပေးလိမ့်မယ်
ပြီးသား firewall နှင့်ဘာမျှမ disable
ကူညီပါ! : C
ရှလကာရည်, ငါခြေလှမ်းများနောက်သို့လိုက်။ "ချိတ်ဆက်မှု" ပေါ်လာပေမယ့်သင်ဆက်သွယ်မှုဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူး၊ ငါ firewall ကိုပိတ်ထားပြီးပြီ။ ငါလုပ်နေတာနဲ့တူတူပဲ။ !!!!!!!! pls ငါ့ကိုကူညီပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ဒီမှာလူအများစုဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကြည့်ပါ။ ဆက်သွယ်မှုလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်၊ ဘယ်တော့မှမဆက်သွယ်ဘူး၊ ကျွန်ုပ် browse လုပ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါရှာလို့မရဘူး၊ firewall ကိုဖယ်ရှားပြီး၊ ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးအမြောက်အများကိုစမ်းကြည့်ပြီးကွန်ပျူတာကိုတောင် format ချခဲ့တယ်။ ငါ ares အကြိမ်ပေါင်းများစွာနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းကို download လုပ်ပါ။ ငါပြတင်းပေါက်များသို့မဟုတ်ကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုရှိကွန်ယက်ဖွဲ့စည်းမှုတွင်ပြproblemနာဖြစ်နိုင်သည်ဟုထင်မြင်သည်၊ ကျွန်ုပ်ကိုအခြားစိတ်ကူးတစ်ခုပေးပါသို့မဟုတ်ငါ့ကိုကူညီပါ၊ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်ကိုကျော်တက်နေသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ Ares များကိုပိတ်ထားလိုက်ပြီ။ ကျွန်ုပ်ပြန်လည်ထည့်သွင်းပြီးသော်လည်းယခုအလုပ်မလုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်နိုင်ပါသလဲ။ တစ်စုံတစ် ဦး ကဤစာကိုဖတ်လျှင်သို့မဟုတ်၎င်းကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါကကျွန်ုပ်အား၎င်းထံသို့ကျွန်ုပ်ထံသို့ပေးပို့ရန်တောင်းဆိုပါ။
မင်္ဂလာပါရှလကာရည်! ငါလက်စွဲစာအုပ်ထဲမှာခြေလှမ်းအားလုံးလိုက်နာခဲ့ကြပေမယ့်အင်တာနက် tab မှာငါတင်သောလိပ်စာကိုထည့်သွင်း, ငါစာမျက်နှာမပြနိုင်ကြောင်းအစဉ်အမြဲငါရတယ်, ငါအမြဲတမ်းအွန်လိုင်းချိတ်ဆက် "ချိတ်ဆက်" ရှိသည်။ ငါပြtheနာဖြစ်နိုင်သည်ဘယ်မှာစိတ်ကူးရှိသည်။ ငါ ares (အဟောင်းကိုဗားရှင်း) ရှိခဲ့ခြင်းနှင့်သူကအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်ခဲ့ခြင်းမပြုမီ, ငါကွန်ပျူတာကို format နဲ့အဲဒါကိုအလုပ်မလုပ်တော့ဘူး။ သင်တင်ထားသောဗားရှင်းကိုထည့်သွင်းပါ၊ ချိတ်ဆက်မှုမရှိပါ ... xfi ကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်မလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!!
ငါ firewall ကိုစမ်းသပ်ပြီးပြီ၊ ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆိပ်ကမ်းကိုငါပြောင်းပြီ၊ ငါဒီမှာဖတ်ပြီးသမျှကိုကြိုးစားပြီးဘာမှမကြိုးစားဘူးဆိုတာကိုအလေးအနက်ပြောဖို့မေ့နေတယ်။ ဒီဟာကစိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ် ...
ထပ်မံနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်! ငါ browser ကိုအလုပ်လုပ်အောင်စီမံပြီးပြီ။ share လုပ်ဖို့ folder တွေကို check လုပ်ထားတယ်။ ဒါပေမယ့်သူကအမြဲ "connect" ဆက်လုပ်နေတယ်။ ဒါကြောင့်လည်းရှာဖွေတာလည်းမရှိသလိုဘာမှမလုပ်ဘူး။ ပြTheနာကသင် program ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှမပေါ်လာဘူးဆိုတာပါ။ အွန်လိုင်းမှာ !!! အကြံဥာဏ်များရှိပါသလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
ငါ ares 2.0.9 ကိုသုံးလို့မရဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒါကငါ့ကိုကူညီပေးပါလို့ပြောတာဟာနာရီဝက်လောက်ကြာတယ်
ကောင်းပြီ၊ အင်တာနက်မသွားဘဲထာဝရချိတ်ဆက်နေသည့်အရာများစွာရှိသည်။ ကျွန်တော့်အဖြစ်အပျက်ကဗိုင်းရပ်စ်များနှင့်ဖိုင်များကိုမျှဝေရန်ကျွန်ုပ်စစ်ဆေးပြီးဖြေရှင်းလိုက်သည်။ အဲဒါမသွားရင်ငါဘာပြောရမလည်းမသိဘူး။
အခြား ports များကိုသုံးကြည့်ပါ။
ငါဆက်သွယ်မှုကို fix, သင်မျှဝေဖို့ folder ထဲမှာသင် ARESTRA ထားသမျှကိုဖျက်ပစ်ရမယ်နှင့်သင် ares ပြန်လည်စတင် despyes ။
သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာမှာကျွန်ုပ်သည် download2kb ထက်ကျော်လွန်ရန်မလိုပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံမှဖြစ်ပြီး၊ ares ကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော့်ကိုကောင်းကောင်းပို့ပေးနိုင်မလားမေးချင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကအဆင့်တွေအကြောင်းရှင်းပြပေမယ့်ဥပမာမပါတဲ့အဆင့်တွေပါ။ ကျေးဇူးပြု၍“ Red” » hashlink »နှင့်အခြား control panel ၏အချက်များ
ငါ ares ကိုဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲဆိုတာအဖြေရချင်တယ်၊ ဒါကအရမ်းကောင်းတဲ့ပရိုဂရမ်တစ်ခုပဲ။ ဒါပေမယ့်ဒီယောက်ျားတွေလိုတတ်နိုင်သမျှမဆက်သွယ်နိုင်ဘူး၊ ဆက်သွယ်ချင်တယ်၊
ရှလကာရည်အတွက်မေးခွန်း: မကြာသေးမီကအနည်းငယ်သောနှေးကွေးစွာ download လုပ်နေသည်။ ကျွန်ုပ်၌တစ်လကြာ disk များကို၎င်းတို့ကို download လုပ်နေသည်။ မည်သည်ဖြစ်နိုင်သနည်း။
မင်္ဂလာပါ။ lalin ပြောတာကိုပြန်ကြည့်ပြီးဝင်လာတဲ့ folder နဲ့ share လုပ်ထားတဲ့ folder ကိုမျှဝေလိုက်ပြီးသူတို့ကအလွတ်ဖြစ်နေတယ် !! ကြိုးစားရန်အခြားအရာတစ်ခုခု? ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!
ဟဲလိုဗားရှင်းအမျိုးမျိုးမှာ ares ကိုအကြိမ်များစွာ download လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ရေဒီယိုကိုနားဆင်နိူင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဘာမှဒေါင်းလုပ်လုပ်လို့မရဘူး။ ငါ luis miguel audio search ကိုထားတယ်။ နာရီပေါင်းများစွာကြာတယ်။ ဘာမှမသီချင်းဘဲမပေါ်လာဘူး…… … ..သူဘာလုပ်ခဲ့လဲ?
ဟယ်လို! ငါသာ theres ကို install လုပ်ပြီး download လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး၊ ဒါကြောင့် google ကိုသွားခဲ့တယ်၊ အဲဒါကငါ့ကိုဒီကိုခေါ်လာခဲ့တယ်၊ \_ t
ငါက configure လုပ်ဖို့ညွှန်ကြားချက်ကိုဖတ်ပြီးပြီယခုငါကြိုးစားပါ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော် ports တွေကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲမသိဘူး
မင်္ဂလာပါ! ကျွန်ုပ်သည် Ares 2.0.9 ကိုသာ install လုပ်ပြီးကျွန်ုပ်ဖတ်သည့်အရာများမှလူအများအပြားကြုံတွေ့ရသောအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ငါ Ares ကိုစတင်သောအခါ၊ ချိတ်ဆက်မှုလုံးဝမရှိတော့ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ Firewall သည်၎င်းကိုပိတ်ဆို့ခြင်းမရှိကြောင်းအတည်ပြုပါ။ ဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်လဲ ?? တစ်ယောက်ယောက်ကသိတယ်။ ?? SPS3 နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။
Jesus Rivero ဟုသူကပြောသည်
ရှလကာရည်, Sunergy နှင့်အတူရှာဖွေမှုနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပျက်သည် ... ငါဥပမာတစ်ခု Peter Gabriel သူတို့နာရီပေါင်းများစွာနှင့်ဘာမျှမတှေ့ရ ... ငါဗားရှင်း 2.0.9 ရှိသည်, သင်တို့အဘို့အသင်အကြံပြုခြေလှမ်းများအတိုင်းလိုက် ပြုပြင်ခြင်း၊ Firewall ကိုပိတ်ထားခြင်းနှင့်ဘာမှမလုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်အားကူညီနိုင်သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
အိုအိုလာ !!! ၃ ရက်အကြာမှာငါ Ares ကိုစွန့်ပြီးသူ့ကိုရှာပါ။ ဒါပေမယ့်သူကငါ့ကိုဘာမှမပြောပြခဲ့ဘူး DESCARGA ကိုစတင်ခဲ့သည်။ နာရီဆိုတာဘာလဲငါဘာလုပ်လို့လဲ?
ဟဲလို JAVII, ငါ ARES 2.0.9 အသုံးပြုရန်အကူအညီရှာနေခဲ့သည်နှင့်သင်၏အသိပညာငါ့ကိုအများကြီးကူညီပေးခဲ့သည့်အချက်များ, ငါအများကြီး ARES နှင့်အတူ DOWNLOAD နိုင်ဘူး။ မင်းရဲ့ခြေလှမ်းတိုင်းကိုငါလိုက်လျှောက်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါဘာကိုမတတ်နိုင်ခဲ့ဘူးလဲ။ ကျွန်ုပ်သည်ဤအစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုရန်အလွန်စိတ်ဝင်စားကြောင်းကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါ။
ပုံမှန်အတိုင်းဘယ်လိုအခြေအနေကောင်းနေသလဲ။ ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးပင်။ သင်အဲဒီမှာလွန်ခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကအရာအားလုံးကိုတွေ့နိုင်တယ်။ ကျွန်ုပ်မှာပြproblemsနာတွေရှိခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ဘာမှမဒေါင်းလုပ်လုပ်လို့မရတဲ့အပြင်အဲဒါကိုဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့တယ်။ လုံးဝ download လုပ်မထားပေမယ့် winrar ၌ရှိနှင့်ပြီးသားသောဖိုင်များကိုလည်းဖျက်ပစ်သည်။ ares သည်ကျွန်ုပ်အတွက်ထပ်မံအလုပ်လုပ်သည်။ ယခုမူကား ares chats ထဲသို့ဝင်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အားနောက်တဖန်ပျက်ကွက်သွားပြီ၊ သင်ဖျက်လိုက်သည်နှင့်ဖျက်လိုက်သည်နှင့်ပရိုဂရမ်တွင်ဘာမှမပါ ၀ င်တော့ပါ။ ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့ကိုထပ်မံတပ်ဆင်ပြီးကျွန်ုပ်မက်ဆေ့ခ်ျကိုရရှိသည်။ ဝန်ဆောင်မှုများသည် chatroom server ဖြစ်သည်။ အမှားနှင့်ထည့်သွင်းရန်မအောင်မြင်ပါ။ stemsystem error.code 1073. သတ်မှတ်ထားသောဝန်ဆောင်မှုရှိပြီးဖြစ်သည်။
မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်က၎င်းကိုမည်သို့ပြုပြင်ရမည်သို့မဟုတ်မည်သူသိသနည်း။ ထပ်မံဖယ်ထုတ်ခြင်းနှင့်ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ခြင်းသည်အခြားဖြေရှင်းချက်တစ်ခုအလုပ်မလုပ်ပါ။
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည် -ares ultra- ကိုခိုလှုံသော်လည်း၎င်းသည်ပုံမှန် ares ကဲ့သို့ဖိုင်များစွာမပါသောကြောင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်မယုံကြည်ပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၌ CADMUS နှင့်ဆင်တူသည်၊ အမြဲတမ်း ares ကိုသုံးသည်။ ကျွန်ုပ်တွင် internet provider company နှစ်ခုရှိပြီးကျွန်ုပ်သည် ares နှင့်အဆင်ပြေစွာလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ် WIRELESS INTERNET သို့ပြောင်းလဲသောအခါ၊ download လုပ်ခြင်းသည် ၂ နာရီကြာသည်။ ကျွန်ုပ် download လုပ်၍ မဝင်နိုင်ပါ။ ပို၍ များသောအားဖြင့်၊ ၎င်းကိုဖျက်ရန်နှင့်အခြားတစ်ခုကိုထည့်သွင်းရန်၊ ကျွန်ုပ်ရရှိသောအခြားစက်ပစ္စည်းအသစ်များမပြီးမီဗားရှင်းများစွာနှင့်ဘာမျှမထည့်ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုများသည် chatroom server မဟုတ်ပါ၊ အမှားနှင့်ထည့်သွင်းရန်မအောင်မြင်ပါ၊ system error.code 2. သတ်မှတ်ထားသောဝန်ဆောင်မှုရှိပြီးသားဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအမှား ၁၀၇၃ ကိုဆိုလိုသည်၊ ၎င်းသည် inalam network ကြောင့်ငါအသုံးပြုသောအရာဖြစ်သည်ဟုမယုံကြည်ချင်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ။ xxxxxxhotmail .com
အကယ်၍ ၎င်းသည် "connection" ပုံပေါ်နေပြီး၎င်းသည်ဤကဲ့သို့သောအတိုင်းဖြစ်နေပါကပြproblemနာသည်၎င်းတို့ပြင်ဆင်ထားသော port နှင့်အတူဖြစ်သည်။ "control panel" လို့ပြောတဲ့နေရာကိုသွားပြီး "download" tab ကိုသွားပြီး "port မှာဝင်လာသော connection ကိုလက်ခံပါ" လို့ပြောလိုက်ရင်သင့်မှာရှိတဲ့နံပါတ်ကိုဖျက်လိုက်ပြီးဘာမှမထည့်ပါနဲ့။ ပရိုဂရမ်ကိုပိတ်လိုက်ပါ။ (၎င်းကိုပိတ်လိုက်ပါ၊ ၎င်းကိုနာရီဘေးတွင်အနည်းဆုံးမထားပါနှင့်) သင်ပြန်လည်ဖွင့်သောအခါ၊ သင်၏ကွန်ပျူတာနှင့် Ares ဆက်သွယ်ထားသော port နံပါတ်သာပေါ်လာလိမ့်မည်။
၄၈ နာရီအကြာတွင် Ares မှပေးသောအခက်ခဲဆုံးပြproblemနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ရန်ရှာဖွေနေသည်။ ERROR 48 ဖြစ်ပြီး၊ ONLINE မပါသောဆက်သွယ်မှုသည်ပြMexicoနာအားလုံးအတွက်ဖြေရှင်းချက်ကိုကျွန်တော်မက္ကဆီကိုနှင့်ကျွန်ုပ်မှရရှိသည်။ အဲဒါကို Moises ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သူနဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်။ ဒီမှာမင်းရဲ့ဖြေရှင်းချက်ကိုပို့လိုက်ပြီ။ link အားလုံးကိုအတူတကွထားလိုက်မယ်။ http: // ဖြစ်ပါတယ်။ youtube .com / watch? v = 1073 70BI9ZGBeo & feature = related
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၌ပြproblemနာရှိနေသည်။ လွန်ခဲ့သော ၂ ပတ်ခန့်ကကျွန်ုပ်သည်ကွန်ပျူတာအသစ်တစ်ခု ၀ ယ်ပြီးမည်သို့ကိုင်တွယ်ရမည်ကိုမသိသောပြတင်းပေါက်များရှိသည်။
ကျွန်တော့်ရဲ့နည်းပညာရှင်ကိုခေါ်ပါ၊ ငါ Windows xp ကို install လုပ်ပါ။ ပြtheနာကငါ ares တွေကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်တယ်။ ချိတ်ဆက်နေတယ်။ ငါကရက်ပေါင်းများစွာထားခဲ့ပြီးဘာမှမဖြစ်ဘူး။ ငါပြconnectingနာကိုဖြေရှင်းဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာငါသိချင်တယ်၊ ဂီတကိုမကူးယူနိုင်လို့ :(
ငါ ARES ကို install လုပ်ပြီး IT က 290 KB အထိအလုပ်လုပ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံး version ကို install လုပ်ပြီး 2.0.9 ကို install လုပ်လိုက်ပါ။ အခုပဲငါ့ကို 20 အထိချပေးလိုက်တာပါ။ ၈ နာရီအတွင်းမှာကျွန်တော်ဟာ KB KB 8 DOWNLOADED ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်၊ 400 KB service kana ပယ်ဖျက်ခြင်းနှင့်ဖျက်ခြင်းအားဖြင့်ဖျက်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ကွန်ပျူတာမှပိတ်ချိန်တွင်ပျောက်ဆုံးနေသောဖိုင်တွဲတစ်ခုအား၎င်းသည်စာရင်းမှပယ်ဖျက်ခြင်းခံခဲ့ရသောယာယီဖိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်လျှင်၎င်းသည်စာရင်းမှပယ်ဖျက်ပြီးဖျက်ပစ်ခြင်းဖြင့်ဖျက်သည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် ares ထည့်သွင်းထားပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်မဆက်သွယ်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်မည်သို့ဆက်သွယ်ရမည်ကိုပြောပါကကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
AMI ကျွန်တော့်အဖြစ်အပျက်ကအရမ်းထူးဆန်းပြီး ARES ဟာကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်တယ်၊
သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကို Router နှင့်ချိတ်ဆက်ပါက၎င်းတို့ကိုချချပြီးအချိန်များတွင်လည်းချမည်။ အချိန်သည်ကြာလျှင်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ချိတ်ဆက်မှုသည်ကျွန်ုပ်အားအမြဲတမ်းပိတ်ဆို့နေစေပြီး PC ကိုပြန်လည်စတင်သည်။ အချိန်နှင့်အညီ၊ ကျွန်ုပ်သည် MODEN ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါကကျွန်ုပ်သည် ၃ MB ဆက်သွယ်မှုရှိပါက 0.5 KBBS အမြန်နှုန်းဖြင့်မြန်ဆန်စွာကျွန်ုပ်ကို DOWNLOADS သို့ဆက်သွယ်မည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည် ROUTER လိုအပ်သည်။ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိပါကအခြား ROUTER ဖြင့်ကျွန်ုပ်ကြိုးစားကြည့်မည် !!!
အကယ်၍ Ares သည်သင့်အတွက်အလုပ်လုပ်သော်လည်းအလွန်နှေးကွေးပါကသင်၏ adsl ပံ့ပိုးသူသည် P2P downloads အတွက်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာဆက်သွယ်မှုရှိနိုင်သည်။
သို့မဟုတ်လျှင်ဤအဆင့်များက rkuerd မဟုတ်ပါက အကယ်၍ ထိုမှတ်စုထွက်လာလျှင်dfirewall id သည်အင်တာနက်အား q tnga ဆက်သွယ်မှုကိုခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းကိုတပ်ဆင်ထားပါကဖိုင်များနှင့်တေးသီချင်းများကိုမရှာဖွေပါ။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ချင်ပါသလဲ။ ? … Grax သင်၏အဖြေ spro
၎င်းကိုကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ရန်အရေးကြီးဆုံးအရာမှာ၎င်းကို firwall တွင် ၀ န်ခံခြင်း (သို့) firewall ကိုပိတ်ခြင်းဖြစ်သည်
ငါ Ares ဗားရှင်းအားလုံးကိုတစ်ထောင်နှင့်တစ်ကြိမ်ကူးယူပြီးတပ်ဆင်ခဲ့သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်ချိတ်ဆက်တိုင်း၎င်းသည် "ဆက်သွယ်မှု" ဆက်ရှိနေပြီး "အွန်လိုင်း" မသွားပါ။ အလွန်အပူတပြင်းကျွန်ုပ်ကြိုးစားခဲ့ပြီးဤပြeverythingနာသည်အဆုံးသတ်သွားလိမ့်မည် ငါ့ကိုရူးသွပ်ဖို့ ကျေးဇူးပြု၍ ရှလကာရည်သို့မဟုတ်သင်တစ် ဦး၊ ကျေးဇူးပြု၍ ဖြေရှင်းပါ။ ထပ်ဆောင်းပြီးတော့သင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့် ARES ဟာတစ်လနီးပါးကြာပြီးတဲ့နောက်မှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
ကြည့်ရှုပါ၊ ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဖက် VINEGRE ကမည်သည့်နေရာကိုသွားသည်ကိုထိန်းချုပ်နေရာမှဒေါင်းလုပ်လုပ်သည်ဆိုသည်ကိုပြောပြလိမ့်မည်။ ထိုနေရာတွင်၎င်းသည် port နှင့် ပါတ်သက်၍ တစ်ခုခုကိုပြောပြီးဖျက်ပစ်လိုက်သည်။ ဤ 7329 ကိုထည့်ပြီးစင်ကြယ်စွာချိတ်ဆက်မှုတွင်ပေါ်ပေါက်လာသောပြproblemနာကိုအသင့်ဖြစ်ပြီလား ဘာမျှမ, ဒုတိယအတွက်အွန်လိုင်းပေါ်လာ !!!!!!!!!!!!! မင်းကိုမျှော်လင့်ပြီးအစေခံ ..............
Ola ငါ ares နှင့်အကြိမ်ပေါင်းများစွာဆက်သွယ်ခဲ့ဖူးပြီး၊ ကျွန်ုပ်အမြဲဆက်သွယ်မှုမပေါ်လာပါ၊ ၎င်းကိုအကြိမ်များစွာ download လုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်အွန်လိုင်းပေါ်တွင်မပေါ်ပါ။
သငျသညျအကြှနျုပျကိုပေးသော configuration နှင့်အတူ ares အလုပ်မလုပ်ပါဘူး
ကျွန်ုပ်တွင် ares ကိုပြုပြင်ပြီးပါပြီ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်တေးဂီတ၊ ဗွီဒီယိုများကိုရှာဖွေသည်။
ငါဖတ်ပြီးသည်များနှင့် ပတ်သက်၍ firewall တွင် ares အသုံးပြုသည့် port နှင့်ပရိုဂရမ်ကိုယ်တိုင်ကိုဝန်ခံရန်ကြိုးစားပါ (ရွေးချယ်စရာနည်းလမ်း ၂ ခုရှိသည် - add port နှင့် add program) ။
တင်ပို့ရောင်းချမှုကိုခွင့်ပြုချက် ၁၊ ဒေါင်းလုပ်အရေအတွက် ၁ နှင့်တစ်ပြိုင်နက် download လုပ်ခြင်းကိုထည့်ပါ။ ကြွင်းသောအရာ 1 မှာ (ထိန်းချုပ်မှု panel ကို, downloads ကို tab)
သည်းခံစိတ်ညီအစျကိုသည်းခံစိတ် corduroy မှကျေးဇူးတင်ပါသည် !!!!
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်လေ့လာသူတစ် ဦး ပါ။ Ares ကို ahy ဟုပြောထားသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ဆက်သွယ်နေပါသည်။ ကျွန်ုပ်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အချိန်မရှိပါ။ .. အကယ်၍ သင်လုပ်နိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်သို့မဟုတ်တစ်ခုခုအတွက်ဘာလုပ်ရမည်ကိုမသိပါ။ ငါ့ကိုအရမ်းကျေးဇူးတင်ပါမယ်၊ နွေးထွေးတဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါ
ငါ Ares ထားပြီဒါကြောင့်ငါ့အဘို့အလုပ်မလုပ်ပါဘူး တစ်နည်းဆိုရသော်၎င်းသည်ခဏတာအလုပ်လုပ်ပြီးနောက်မည်သည့်အရာမျှမကျဆင်းသွားပါ။ ကျွန်ုပ်ဘာဖြစ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်သည်။
လွိုင် ၁၄ ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ares 2.0.9 ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ပြောချင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်အတွက်အဆင်ပြေပါသည်။ နောက်တစ်နေ့တွင်ဒေါင်းလုပ်ချပြီးပါကကျွန်ုပ်ဆက်သွယ်လိုက်ပြီး၎င်းသည်ဘယ်တော့မှအွန်လိုင်းသို့မသွားပါ။ တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာစနစ်ကိုစိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ဖျက်ပစ်လိုက်တာပါ။ (မှတ်ချက်များအားလုံးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြီးပြီ၊ ကျွန်ုပ်အတွက်တော့အလုပ်မလုပ်ပါဘူး)
Ares သည်ကောင်းသော်လည်းသင်ဗိုင်းရပ်စ်နှင့် ပတ်သက်၍ သတိထားရန်လိုအပ်သည်၊ ၎င်းပရိုဂရမ်အမျိုးအစားကိုအသုံးပြုသောအခါ၎င်းတို့တွင်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဗိုင်းရပ်စ်ကောင်းစွာရှိရမည်။
လူးဝစ်၊ ares စာကြည့်တိုက်ရှိဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောဒြပ်စင်များကိုစီဒီတစ်ချပ်ထဲ၌သင်ဖျက်ရန်သို့မဟုတ်သိမ်းဆည်းရန်လိုအပ်သည်၊ ပရိုဂရမ်ကိုသတင်းအချက်အလက်များစွာဖြင့်မဖြည့်တင်းသင့်ပါ၊
Rodrigo Arana ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်ဂီတကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်သောအခါ၊ အခြားသီချင်းများအတွက်အခြားဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်နေရာများသည်အဝါရောင်ဖြင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ
အစဉ်မပြတ်ငါဆက်သွယ်နေတယ်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမှဘယ်လိုဆက်သွယ်တယ်ဆိုတာကိုဘယ်သူမှမပြောဘူး၊ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး။
Bizcoxit0 အမှန်တရားကတော့ဘာဖြစ်လို့ Ares ဒီလိုပြုမူရတာလဲကျွန်တော်မသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူနဲ့သူမသွားနိုင်ခြင်းအားဖြင့်ဘာမှမလွတ်သွားဘူး။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော Firefox use ကိုအသုံးပြုပါ
၄၈ နာရီအကြာတွင် Ares မှပေးသောအခက်ခဲဆုံးပြproblemနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ရန်ရှာဖွေနေသည်။ ERROR 48 ဖြစ်ပြီး၊ ONLINE မပါရှိသောဆက်သွယ်မှုသည်ပြ,နာအားလုံးအတွက်အဖြေရှာတွေ့ပြီး Moises အားကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ပြီးတော့မင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပြီးသူနဲ့ဆက်သွယ်ပါလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒီမှာမင်းရဲ့ဖြေရှင်းချက်ကိုပို့ပေးပါ။ ချိတ်ဆက်မှုအားလုံးကိုအတူတကွထားပါ။ http: // ဖြစ်ပါတယ်။ youtube .com / watch? v = 1073 70BI9ZGBeo & feature = related
ဗွီဒီယို၏ဖော်ပြချက်တွင် ares Command များမှကျွန်ုပ်တို့ download လုပ်၍ သက်တမ်းတိုးရမည့်လိုအပ်သည့်ဖိုင်များကိုသင်တွေ့ရှိရပါလိမ့်မည်။ ARE ၏ inetreno commands များကိုအသစ်ပြန်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ARE ကိုပထမဆုံးအကြိမ်အလုပ်မလုပ်ပါက ARE ကိုမွမ်းမံလိမ့်မည် နောက်တစ်ခါထပ်တူအဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့လျှင် Action ကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရပါမည်။ ၎င်းသည်အွန်လိုင်းဆက်သွယ်မှုကိုတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင်၎င်းသည် ONLINE သို့မသွားနိုင်သော်လည်းဖြစ်နိုင်လျှင်၎င်းသည်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ဖိုင်များနှင့်၎င်းကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန် ADSS ထဲသို့ထည့်ပါလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်သည်သတင်းအချက်အလက်များကိုသုတေသနပြုခြင်း၊ စုဆောင်းခြင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်အင်တာနက်ပံ့ပိုးသူ (၄) ဦး နှင့်စမ်းသပ်ခဲ့ပြီး၊ ချိတ်ဆက်မှုပျက်ကွက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဖိုင်များနှင့် / သို့မဟုတ်ပရိုဂရမ်များကဤလုပ်ဆောင်ချက်ကိုလုပ်ဆောင်သည်။ OSEA သည်အကန့်အသတ်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏နိုင်ငံအတွင်းရှိအင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ် ၄ ခုမှ OSEA သည်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိသည်။ ငါနောက်ထပ်သုံးစွဲသူများရှိသည်သောကုမ္ပဏီနှင့်အတူငါအဆုံးသတ်ငါ့ကိုချပေးသည်ကန့်သတ်ချက်, အခြားနည်းလမ်းများ၌လည်းသူက 4G နှင့်ကြိုးမဲ့နည်းပညာကြိုးစားနေတယ်, Satellitia အားဖြင့်, ငါသည်သင်တို့ကိုလျှောက်ထားပါလျှင်သင့်ကိုအသုံးပြုလျှင် IFS အသုံးပြုသည်။ WIRELESS သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သို့သော် ARES၊ EMULE၊ LIMEWIRE၊ TORRENS တို့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သင်၏နိုင်ငံတွင်အများဆုံးပါ ၀ င်သော PROVIDER နှင့်ဆက်နွယ်မှုရှိခြင်းက ပို၍ ကောင်းသည်။ နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်ဖော်ပြခဲ့သောဗွီဒီယိုကိုကြည့်ရှုရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ တကယ်လို့များအလုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုသည်းခံပါ၊ အမှန်တရားရဖို့အတွက် $$$ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများစွာကုန်ကျတယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် download ပြုလုပ်ပြီးသောအရာများကိုမည်သို့ဖွင့်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်သိလို။ ၎င်းကိုမဖယ်ရှားနိူင်ပါ။ တစ်နေ့တွင်ကွန်ပျူတာသည်မီးလင်းသွားပြီး၎င်းကိုဖွင့်သောအခါပိတ်ဆို့ခံရပြီး၎င်းကိုမတားနိုင်ပါ။ ငါကျေးဇူးတင်ပါတယ်လုပ်နိုင်သမျှကို download လုပ်ပါ
မင်္ဂလာပါ လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်အထိ ARES သည်အံ့ဖွယ်အမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာအသံနှင့်ဗီဒီယိုဖိုင် ၂၄ ခုကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်မြန်ဆန်စွာနဲ့ပြproblemနာမရှိဘဲ download လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ရုတ်တရက်၊ ကျွန်တော်ပလပ်ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ၊ download မျက်နှာပြင်ကကျွန်တော့်မှာ download လုပ်ရန်တောင်းဆိုခြင်းထက်ဖိုင်များစွာပိုများကြောင်းပြသည်။ ၁၀၇ အနက် ၂၀ ခန့်သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသည်။ ရုတ်တရက် ARES သည် download folder ၏ subdirectories ၌ရှိသောဖိုင်များကိုရှာရန်မထင်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ ARESTRA_ ဖိုင်များအားလုံးကို subdirectories မှ downloads directory သို့ကူးပြောင်းပြီးပြီ။ ငါ့ကိုဖိုင်တွေပိုယူသည်။ (၁၀၇ အနက် ၆၀ ခန့်) ထို့အပြင်၎င်းသည်ချိတ်ဆက်ခြင်း၊ အွန်လိုင်းပေါ်လာခြင်းနှင့်ဒေတာများကိုတင်ပို့ခြင်းဖြစ်သော်လည်းမည်သည့်အရာမျှ download လုပ်၍ မရပါ။ ဘာဖြစ်နေတာလဲ ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲ
အခြားသတင်းများအရယခုတွင်ကျွန်ုပ်သည် download ချခြင်းကိုမဖျက်နိုင်ပါ။ (: S)
ရှာလကာရည်ဖြေရှင်းချက်ကကျွန်မရဲ့ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းပြီးတဲ့နောက်ဖိုင်တွဲအချို့ကိုကျွန်ုပ်၏“ ဖိုင်တွဲ” ထဲမှာထည့်ပြီးချက်ချင်း“ အွန်လိုင်း” ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်…ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်တွင် Ares 2.0.8.3029 ရှိပြီး CCProxy နှင့်စက်မှတဆင့်ချိတ်ဆက်ရန်ကြိုးစားသည်၊ ၎င်းသည်ဘယ်သောအခါမျှ ဆက်သွယ်၍ မရနိုင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အဆုံးမဲ့ဖွဲ့စည်းမှုများနှင့်ဘာမျှမကြိုးစားဘဲကြိုးစားနေသည်။
တစ်စုံတစ် ဦး ကအဖြေရနိုင်မလား။
အရမ်းကောင်းတယ် 10 !! ဟားဟား
နွေရာသီမတိုင်ခင်အထိ resres တွေကperfectlyုံကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးယခုငါမသွားနိုင်တော့ပါ။ ငါကလူတွေကိုဒီမှာမှတ်ချက်ပေးသောအရာအားလုံးကိုပြုမိပါပြီ။ ကျေးဇူးပြုပြီးနောက်ထပ်ဖြေရှင်းချက်များ
ငါမှာ ares nose ပြaနာရှိနေတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအသုံးပြုသူတစ် ဦး တည်းနဲ့သာဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်တယ်။ ၂ ရှိရင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်လို့မရတော့ဘူး။ အရာရာတိုင်းနီးပါးလုပ်ပြီးပြီ။ ဘာမှမတူဘူး။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကငါ့ကိုကူညီနိုင်တယ်။
SOS ............. သင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် - အထူးသဖြင့်အာတိတ်သားတစ် ဦး —————————
ဆိပ်ကမ်းများကိုစစ်ဆေးပြီးကောင်းစွာဆက်သွယ်ထားသော ၅၀၂၁ ကို ထား၍ ၎င်းသည် ba ba ကိုကောင်းစွာသုံးသော 5021 ptm သို့မဟုတ် tb ကိုလျော့နည်းစေသည်
ဒါက porn ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်လို့ထင်တယ်
သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်သီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုတစ်ချိန်လုံးဤသို့အစဉ်လိုက်မည်သို့လွှဲပြောင်းနိုင်မည်နည်း။ သင်အဘယ်ကြောင့်အခင်းအကျင်းကိုထည့်ပြီးအဆုံးသတ်သည်အခြားအခင်းအကျင်းကိုလက်ဖြင့်ထပ်တူထပ်မံထည့်ရမည်၊ မပေးသည်၊
Octak ပါ ဟုသူကပြောသည်
ငါ၏အ ares စုစည်းဖို့ရက်ပေါင်းများစွာယူခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ငါဆက်သွယ်ရေးရွေးစရာမှာအမြဲတမ်းရှိနေပြီးဒီကြီးမားတဲ့အကူအညီနဲ့ပေါ်လာတဲ့ port အတွက်အဝင်ဆက်သွယ်မှုကိုပြောင်းလဲပစ်လိုက်တာက ၇၃၉၉ ကိုငါထားလိုက်တယ်။ ares တွေကိုပိတ်လိုက်တယ်၊ ပြန်ဖွင့်လိုက်တယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်သင်ကူညီနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်၊ သင်ပြောခဲ့တဲ့အဆင့်အားလုံးကိုလုပ်ပြီးပါပြီ၊ ဒါပေမယ့်ဘာမှမဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးပါသေးတယ်၊ ပိုများပါတယ်၊ ဘာမှမရှာပါဘူး၊ ဘားမှာအွန်လိုင်းပြောနေတာထက်ဆက်သွယ်မှုကဆက်ပြောပါတယ် ကြောင်းလမ်း, မျှော်လင့်ငါ့ကိုကျေးဇူးတင်ကူညီ
သငျသညျအကြှနျုပျ၏ Ares ပြုပြင်ဖို့ကူညီပေးခဲ့သည်အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
နောက်မှငါ cirbio de alfçgoဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့မင်းကနောက်ထပ်အရာတွေကိုလုပ်ရမယ်
ဟဲလိုဗင်းဂရာ, ငါပြောသမျှအရာအားလုံး 03 ငါ့သညျငါ့ ARES နေဆဲ XNUMX သီတင်းပတ် "ချိတ်ဆက်" နှင့် "ON LINE ကို" ပေါ်တွင် NOTHING ဘာမှမ ... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားအကူအညီများပေးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါလူတွေ ... အမှန်တရားကတော့ Ares ဟာချိတ်ဆက်မထားဘူး၊
ကျေးဇူးပြု၍ အကူအညီလိုပါတယ် The ares သည်အချိန်တိုင်း«ဆက်သွယ်မှု»ကိုပြုလုပ်သည်၊ ၎င်းသည်မဆက်သွယ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်ဆက်သွယ်မှုကိုစစ်ဆေးပြီး k မှတက်ထားသည့်အရာနှင့်ဘာမှမကိုဖယ်ထုတ်သည်။ ငါအဖြေကိုမျှော်လင့်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
အားလုံးမင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်အားအမှန်တကယ် ၁၀ ကြိမ်ကဲ့သို့ဖျက်ပစ်ပြီးထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အရာရာကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏အဖြစ်အပျက်သည်ရှာဖွေနေခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း မှလွဲ၍ တစ်ခါတစ်ရံတွင်၎င်းသည်ဒေါင်းလုတ်လုပ်ရန်စတင်သော်လည်းအများဆုံး download ၃ ခုတွင်ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ပို။ ပင် ??????????????
ကူညီပါ !!! ဟုသူကပြောသည်
ares 2.0_ _ _ _ _ ကို install လုပ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အမြဲတမ်းအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုမပြုလုပ်ရန်အမြဲပြောပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ထိပ်ဆုံးတွင်ဖော်ပြထားသောအရာအားလုံးကိုလိုက်နာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အကူအညီလိုအပ်ကြောင်း pleaserrr ကိုဆက်သွယ်ကြောင်းအမြဲတမ်းပြောပါသည် !!! ငါအရမ်းအပူတပြင်းဖြစ်၏ !!!!! : '(
ခင်ဗျားက limewire ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲဖို့အကြံပေးတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်မရှိဘူး .. pc မှာဗိုင်းရပ်စ်ရှိတယ်။ နှင့် Ares ယခုအများအပြားဗိုင်းရပ်စ်နှင့်အတူကြွလာ
မင်းကိုငါ့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ် .. နုတ်ဆက်ပါတယ်
- = အထွေထွေ = - ဟုသူကပြောသည်
။ :: IDOL- IDOL …
ငါ Ares ကိုချစ်တယ် 🙂
အချို့သော "HASHLINK" ကို download လုပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်၏ ares သည်ချိတ်ဆက်ထားသည့်အမှတ်တံဆိပ်အားလုံးကိုအဘယ်ကြောင့်မချိတ်ဆက်သော်လည်းအလုပ်မလုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိချင်ပါသည်
ကျွန်ုပ်သည်စိတ်ပျက်အားလျော့နေပြီး၊ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်မတပ်ဆင်နိုင်ခဲ့ပါ၊ ၎င်းကိုအိုင်တီဖြင့်ပြန်လည်တပ်ဆင်ရန် (၂၀) ​​နှင့်ပြန်လည်တပ်ဆင်ခဲ့ပါသည်။ ဆိပ်ကမ်းနံပါတ် (D) ကို ၇၃၂၉ သို့ပြောင်းခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ပိတ်ခဲ့ပြီးဖွင့်လှစ်ရန်အတွက်ပြန်လာခဲ့ပါသည်။ ငါသည်သင်တို့ကိုအကြံပြုအရာခပ်သိမ်းခဲ့ကြ .... ငါမူကားငါ့ ares ဘာမှမအခုအချိန်မှာသူကပြောပါတယ်, လူတွေကငါရှိရာဒေါင်းလုပ်ချခြင်းနှင့်ငါသူတို့ကိုငါမေးရာကိုငါရှာသော်လည်း, ငါသည်မည်သည့်အရာမဆို DOWNLOAD !! ။ AND ငါချပါစေ !! SOS, SOS, SOS ။ HEEP MEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !!
ငါတွေ့သမျှအရာအားလုံးကိုငါကြိုးစားခဲ့ဖူးသလိုပဲ။ ငါ ares ကိုဆက်သွယ်လို့မရဘူး၊ ငါဘာမှမပြောင်းဘူး၊ ငါ ports တွေလုံးဝပြောင်းလိုက်ပြီ။
julio ostos "HELP" ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ ares ကိုဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာပြောပြဖို့မင်းကိုလိုအပ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါရှာတဲ့နေရာမှာငါအနုပညာရှင်ဒါမှမဟုတ်သီချင်းကိုထည့်လိုက်တာပါ။ ဒါကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှထွက်လာတယ်။ ဘာမှမရဘူး။ ငါ့ကိုကူညီပေးပါ။ ဤအရာသည်အသစ်အဆန်းဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်မှာ xxxx
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၌ ares များရှိသော်လည်းသူဘာဖြစ်မည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သူသည်ကျွန်ုပ်ကိုမငြင်းပယ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်သူအားသီချင်းများရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်အားဒေါင်းလုပ် လုပ်၍ မရပါ။
အစ်ကို၊ ကျွန်ုပ်သည်ရှာဖွေရေး tab တွင်ကျွန်ုပ်၌ရှိသောပြproblemနာရှိနေသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ မည်သည့်အရာမျှရှာမတွေ့ပါ။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
အားလုံးမင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ကိုဆက်သွယ်ပြီး Ares သည်စတင်နေသော Ares နှင့် ပတ်သက်၍ ပြaနာတစ်ခုရှိပါသည်။ သို့သော်အသုံးပြုသူကော်လံတွင်အသုံးပြုသူ ၂၀ ကျော်ရှိသောအခါကျွန်ုပ်ကိုရပ်တန့်စေပါသည်။ မင်းငါ့အတွက်ဖြေရှင်းပေးနိုင်မလား?
အားလုံးမင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် pc ကို format ချပြီး Ares 2.0.9.3030 ကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာတပ်ဆင်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်သည် firewall ကိုမကြာခဏပိတ်ထားပြီး ၄ င်းသည်ကျွန်ုပ်အားဆက်သွယ်နေကြောင်း၊ ဤနေ့ရက်များနှင့်နေ့ရက်များကိုဆက်သွယ်ပြီးမဆက်သွယ်ပါ။
ငါ HELP လိုအပ်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင် PC နဲ့အတူအရမ်းကောင်းတယ်ဆိုရင်
ကျွန်ုပ်သည် BitDefender စုစုပေါင်းလုံခြုံရေး ၂၀၀၈ ဗိုင်းရပ်စ်ကို install လုပ်ထားသည်၊ ကျွန်ုပ် Firewall ကိုပိတ်ထားပြီး၎င်းသည်ရှာဖွေရေး mode တွင်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ကို browse လုပ်ခွင့်ပေးသည်၊ သို့သော်အွန်လိုင်းမဟုတ်ပါ၊
configure ares, ယခုငါကသိမ်းပိုက်နိုင်ပါတယ်
ငါဆက်သွယ်မှုကိုပြောတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ ares စတင်ရန်နိုင်ခဲ့ဘူး
ပြန်ကြားချက်မေးလ် xxxxx ပေးပို့ပါ
ကိုယ့် Ares အပေါ်ဘာသာရပ်အဖြေအဖြစ်ထားတော်မူ၏။
မင်္ဂလာပါကောင်းပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်ပြproblemနာကကျွန်ုပ်နှင့်ချိတ်ဆက်ပုံပေါ်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည် tamas ကိုတွေ့ပြီ၊ အရာအားလုံးအဆင်ပြေသည်။ သို့သော်၎င်းသည်၎င်းတို့ကို download လုပ်မထားပါ။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းငါ port 7329 ကိုတင်သော်လည်းတစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်ကိုမကူညီနိုင်ပါ။
ဟဲလိုငါ ares ရှိတယ်။ ငါ့အတွက်တော့အလုပ်မလုပ်ဘူး။ ချိတ်ဆက်နေပုံရတယ်။ ဒါပေမယ့်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ရင်မဆက်သွယ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမှငါ့ကိုမကူညီနိုင်ဘူး။
ချိတ်ဆက်နေတယ် ... ချိတ်ဆက်နေတယ်။ ကျွန်ုပ်မှာပရိုဂရမ်တွေအချည်းနှီးမရှိဘူး၊ ဒါကြောင့်ကျွန်မရဲ့ပြLEနာကသင့်ကိုအမြဲတမ်းမေးခဲ့ဖူးတယ် ... ငါအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းဆက်သွယ်နေတယ်၊ ​​အမြဲတမ်းငါမျှော်လင့်နေတယ်၊ ​​ဘယ်တော့မှထွက်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အရာ၊ Firewall နှင့်ပင်လျှင်သင်မနိုင်လျှင်, သင်ရောက်ရှိနိုင်သလား? မင်းမရှိရင်ငါတို့နဲ့အတူဘာဖြစ်သွားမလဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Carlos Eduardo ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်တွင် ares 2.0.8 ရှိသည်။ လွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်ခန့်အထိကျွန်ုပ်တောင်းခံသောအရာများကိုကူးယူခြင်းမပြုတော့ပါ။ သင်ရေးသားခဲ့သည့်အရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်ဖတ်ခဲ့ရသည်။ သို့သော် resres သည်အလုပ်မလုပ်ပါ။ အင်တာနက်ပင်မစာမျက်နှာ»သေတ္တာကျွန်ုပ်တွင်မရှိ၊ ကြည့်ရှုနေ၊ ရှာဖွေသည်၊ ရှာသည်; အဲဒီ box ကိုဖွင့်ထားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ မကြာခင်သင့်ရဲ့အဖြေကိုမျှော်လင့်ပါတယ် ပထမ ဦး ဆုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်နှင့်ကြုံတွေ့ရသောအရာတစ်ခုခုကြုံတွေ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်ကိုအွန်လိုင်းမှစတင်သည်။ ၂ မိနစ်အကြာတွင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုဆက်သွယ်လာပြီးခဏကြာမှစတင်ဒေါင်းလုပ်ချလာသည်။ သူကကျွန်တော့်ကိုဆက်သွယ်ပေးတယ်
ကောင်းပါပြီ။ xicos kerias ကိုကြည့်ပါ၊ ဒီစာမျက်နှာအတွက် downloads ကမ္ဘာကြီးကိုရောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော် configured လုပ်လိုက်တာအံ့သြမိပါတယ်၊ ဒီဟာမတူကွဲပြားမှုများစွာနဲ့အမြန်နှုန်း!
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် ares နှင့်ပြproblemနာရှိပါသည်၊ ကျွန်ုပ်ကောင်းမွန်စွာပြုပြင်နိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်အစဉ်အမြဲရနိုင်ပြီးမည်သည့်အခါမျှဆက်သွယ်မှုမရှိပါ။ ၀ င်းဒိုးများနှင့်အရာအားလုံးကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းရန်ကြိုးစားသည်။ ကျွန်ုပ်ကိုဆက်သွယ်ခွင့်မပြုပါကကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါကကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ငါ့မှာတစ်ခုရှိတယ်၊ ငါဒီစာမျက်နှာပေါ်မှာထားသမျှအရာအားလုံးကိုလုပ်ပြီးပြီ။ ငါပြုပြင်ပြီးပြီ၊ ချိတ်ဆက်ပြီးထွက်သွားတယ်။ ဒါကြောင့်တစ်နေကုန်ယူပြီးမဆက်သွယ်ဘူး။ ငါပျင်းတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကငါ့ကိုကူညီတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
DIOMEDES များ ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ။ ဟုသူကပြောသည်
ei! ကျွန်ုပ်သည်အကူအညီလိုအပ်သည်။ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်သည်မှန်ကန်စွာဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောနေရာများနှင့်ကျွန်ုပ်သည်ခြေလှမ်းများအားလုံးကိုလိုက်ခဲ့ပါသော်လည်းမဆက်သွယ်ပါ။ ထိုအခါငါ "proxy ကိုမသုံးပါ" option ကိုလည်းထောက်ပြခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်သင့်သလဲ?
ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား? ဆိုလိုတာကငါ ares တွေကိုလျှော့ချလိုက်တယ်။ အဲဒါကငါ့ကိုဆက်သွယ်ခွင့်မပြုဘူး၊ ငါကဆက်သွယ်ဖို့ပေးလိုက်တယ်၊ အဲဒါက“ connection” လို့ပြောပေမယ့်ငါမသွားခင်မှာသွားလို့မရတော့ဘူး။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သိသည်မှာကျွန်ုပ်သည် ares နှင့်ပြproblemနာတစ်ခုသာမကကျွန်ုပ်၏အချိန်တိုင်းဆက်သွယ်မှုဖြစ်စေသောအရာအားလုံးကျွန်ုပ်ကြိုးစားသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်ပါစေကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်ဘာမှမဒေါင်းလုပ် လုပ်၍ မရနိုင်ပါ။ ရှာဖွေမှုလုပ်ရန်သာပြောပါလိမ့်မည်။
ငါ၏အ tb မှငါ့ကိုချိတ်ဆက်ပြသ, အဘယျသို့လှိုင်းတံပိုး, ကူညီပေးပါ!
[CG] [Diego] ဟုသူကပြောသည်
မင်းရဲ့စာကိုငါကျေးဇူးတင်ပါတယ် THE ARES ငါ့ကို online ရစေတယ် !!
အစဉ်အမြဲငါငါ့ကို "ချိတ်ဆက်" အဖြစ်ထင်ရှားနှင့်အိုင်တီ ONLINE ကိုဘယ်တော့မှမ
အခုဆိုရင် XD လျှင် ...
ကောင်းသော KPO ငါသည်သင်ပွေ့ဖက် BYE ...
ပြီးတော့အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ၀ င်ရောက်ဖို့သင်ဘာလုပ်ပေးမလဲ။
ကျွန်ုပ် download လုပ်သောဗွီဒီယိုများနှင့်ကျွန်ုပ်မည်သို့ကြည့်ရမည်ကိုသိလိုသည်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောဖြစ်ပျက်မှု၊ ကျွန်ုပ်သည်ဆက်သွယ်မှုကိုဘယ်တုန်းကမှမရပ်တန့်ခဲ့ပါ၊ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်သည်ဆင်းသွားနိုင်သည်၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင်မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်အွန်လိုင်းသို့မည်သို့ရောက်နိုင်သည်၊
ဒါကကပ်ရောဂါဖြစ်ရမယ်။ ငါလည်းဆက်နွှယ်နေတယ်။ ဘယ်သူလုပ်ရမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှသိမှာမဟုတ်ဘူး။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်တော်ကလေထဲမှာတေးဂီတကိုနားထောင်တိုင်းအချိန်တိုင်းသီချင်းရဲ့အဆုံးမှာငါကပရိုဂရမ်မထားသေးတဲ့နောက်ထပ်သီချင်းတစ်ပုဒ်ရှိတယ်၊ ဖွင့်စရာစာရင်းကိုကြည့်တဲ့အခါဘယ်တော့မှမဖျက်ရသေးတဲ့သီချင်းနှစ်ပုဒ်ရှိတယ်၊ သူတို့အမြဲရှိတယ်၊ သူတို့ကိုမည်သို့ဖျက်ရမည်၊ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်လျှင်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ bye.-
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ကိုကြည့်ပါ၊ ကျွန်ုပ်အစီအစဉ်ကို ၁၀ ကြိမ်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။ download လုပ်လို့မရပါဘူး။ karspersky (သို့) firewal ကြောင့်ပြproblemနာရှိရင်ဘာဖြစ်လို့ပြisနာရှိရတာလဲ။ ငါ့ကိုအင်တာနက်ရှိလို့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ usb လိမ္မော်ရောင်ကျေးဇူးတင်စကားနှုတ်ခွန်းဆက်သ
ကျွန်ုပ်၏ ares များကိုအလုပ်မလုပ်နိုင်ပါ၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်သံသယရှိသောကြောင့်အမြန်နှုန်းသည် 416 ဖြစ်ပြီးဘာလုပ်ရမည်နည်း။
AT & T ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ၊ ဒီစာတွေရဲ့အကြောင်းပြချက်ကငါ ares ကို install လုပ်ပြီးဘဝရဲ့အရာတွေကြောင့်ငါ့ရဲ့ကွန်ပျူတာပျက်သွားတယ်။ ငါ format လုပ်ရတယ်။ ARES ကိုပြန် install လိုက်တဲ့အခါ install လုပ်လိုက်တယ်။ »သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခု) သို့သော် ထိုအချိန်မှစ၍ ငါဘယ်နေရာသို့သွားသည်၊ မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသလဲ ares ကိုမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုသွားလျှင်၎င်းတို့သည်၎င်းကိုပိတ်ဆို့ထားခြင်းသို့မဟုတ်အလုပ်မလုပ်ခြင်းနှင့်ထိုအကြောင်းတစ်စုံတစ်ယောက်က Antoni atte အားပြောနိုင်သည်…
infinitum 2wire modem ကို configure လုပ်ထားတဲ့အတွက်လပေါင်းများစွာကျွန်ုပ်သည် ares ထည့်သွင်းထားပြီးပြitနာမရှိခဲ့ပါ။ ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုသည်ဆက်သွယ်ခြင်းမရှိတော့ပါ။ ငါ emule, Utorrent စသဖြင့်အခြားပရိုဂရမ်များမှဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်လျှင်။ ဒါပေမယ့် ares NO ၏
အိုလေ .. သင်ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာကိုမသိဘူး၊ ဒါပေမဲ့ဒီနည်းကိုနည်းနည်းလေးပြPROနာနဲ့ငါ့ကိုဒီနည်းကိုဖြေရှင်းဖို့အလွန်အံ့သြစရာကောင်းတယ်။
အွန်လိုင်းမှာဘယ်လိုနေလဲ Ke ငါ့ကိုဆက်သွယ်မထားဘူးငါအရမ်းအပူတပြင်း !!! fas များအတွက်အကူအညီ !!!
စာကြည့်တိုက်မှာသီချင်း ၅၀၀၀ ထက်ပိုပြီးနောက်ထပ် ၂၉၀ ယောက်ရှိတယ်။ ငါရှာမတွေ့နိုင်သောအဝေးသို့ရောက်သောအရာ
အကယ်၍ ares ဖိုင်တွဲသည် manual configuration တွင်မပေါ်ပါကမည်သို့လုပ်မည်နည်း
Facebook ကြော်ငြာ: အွန်လိုင်းကြော်ငြာအခြားနည်းလမ်း၊ အပိုင်း ၂